Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 26, 2021 | hofisi
Yakanaka idiki yekutenga-themed yekufambisa mifananidzo muPowerPoint. Kubereka zvese izvi iwe unekodzero kune toni yetipi. Nzira yakanaka yekuchengetera pane akanaka mazano kune ako anotevera masiraidhi. Tora mukana wekutarisa iwo akasiyana maficha ehurukuro yakanaka mune yakasara yechinyorwa.
Gadzirira chimiro chehurukuro yako pamberi
Kana vanhu vachizoungana kuti vapinde muhurukuro yako. Ivo havauye kuzotarisa mafoto akanaka. Ivo vane basa uye zvirokwazvo hapana nguva yekutambisa. Saka unofanirwa kunyatsogadzirira meseji iwe yaunoda kuburitsa. Zano rakadzama rinotsanangura kutevedzana kwezvidzidzo zvauri kuzokurukura uye marongero azvo akakosha chinhu chakakosha.
Ita shuwa kuenderana kwehurukuro yako
Uine zano rakajeka rekuti kupindira kwako kuchaitika sei mupfungwa. Izvo zvakakosha kuti iwe utarise kuenderana zvese muzvinhu uye muchimiro cheicho chizere. Kana imwe slide inoshandisa imwe mavara uye mavara. Kunyangwe iwe uchitaura zvinopesana kana zvakanyatso nyorwa mazwi, iko kuunganidzwa kwezvikanganiso zvidiki kunodzorera kumashure mufananidzo weamateurism. Ipo, nekupesana, boka remasiraidhi anoremekedza akafanana graphic charter ane mutsara uye yakajeka mifananidzo. Ucharatidza kugona kwako kwakakwana kwemamiriro acho ezvinhu.
Shandisa midhiya zvakanaka
Ichishandiswa pasina kuwandisa, mifananidzo ine mapikicha akanaka inogona kuita kuti vateereri vako vamuke. Nekudaro, chenjera kuwedzeredza munzvimbo ino. Masiraidhi akashongedzwa nemifananidzo yakashongedzwa isingawedzere chinhu. Mumhanzi wemufirimu pakati pechiratidziro kuratidza husina basa. Zvese izvi zvinogona kutorwa sekushaikwa kwekukoshesa. Rangarira kuti mufananidzo uri nani pane chiuru chemazwi uye zviri nani kuti urambe uri nyore. Iyo mharidzo inofanirwa kunge yakavakirwa pane yako yekupindira. Masiraidhi aripo ekutsigira iwe uye kuratidza pfungwa yako.
Shandisa zvakakodzera masosi
Paunotaura nezve nhamba kana ruzivo, zvakakosha kuti isu tizive kwakatangira chitaurwa chako. Izvi zvinobvumidza vateereri vako kuti vaongorore chokwadi chemashoko aunovapa. Kuomarara uye kuoma kwebasa rako hazvigone kupokana. Kuvimbika kwako kunozobuda kwakasimba. Iwe hauzovhiringidzika neavo vanokanda kunze manhamba kana kutaura zvinhu zvisinga gutsikane, vanyengeri.
Dzidzira mharidzo yako pamberi peD-Day
Chinja zvaunodzidzira kune zvinonetsa zvehurukuro zvaunofanira kupa. Zvekukurumidza kusangana newaunoshanda navo, zvakapusa maitiro bvunzo zvinokwana. Kune rimwe divi, pane imwe nyaya ine zvakakomba mhedzisiro kana paitika kukanganisa. Unofanirwa kudzivirira kushaya hanya kwese, kunze kwekunge wagamuchira mhedzisiro. Iko hakuna mubvunzo wekuziva pamberi pemutengi kana maneja kuti rimwe remazita ako hariratidzike. Iko kupi kwawakambokanganwa kuperetera kutarisa ako ese zvinyorwa. Zvese zvinofanirwa kuongororwa pamberi.
PowerPoint inofamba mifananidzo yekudzidzisa Kurume 5th, 2021Tranquillus
pashureKushanya kwekurapa mu2021: ndezvipi zvaunosungirwa?
zvinoteveraKambani: vashandi havachakwanise kupfeka masiki ekugadzira